६ लाख खर्चेर धुमधाम बिबाह गरेर भित्र्याएकि बेहुली सु’हागरात नै मनाउन नदिई टा’प” – Wow Sansar
६ लाख खर्चेर धुमधाम बिबाह गरेर भित्र्याएकि बेहुली सु’हागरात नै मनाउन नदिई टा’प”
January 3, 2021 85
बुटवल /सुदुर समाज गायिका अञ्जु पन्तको- ‘माया एउटासंग बिबाह अर्कोसंग’ बोलको गीतले थुप्रै युवा धड्कनको आत्मासात गरेको छ । उक्त गीत आत्मासात गर्ने पछिल्ला युवा धड्कन हुन, गुल्मीका एक जोडी । उनीहरु हुन रेसुङ्गा नगरपालिका–६ नेटाखर्ककी २३ वर्षिया ललिता बिक र गुल्मी दरवार गाउँपलिका–७ चारपाला काफलचौरका २७ वर्षिय करन सुनार । उनीहरुबीच असोज–२७ गते धुमधामसंग मागी बिबाह भएको थियो ।
यता माईतीमा नयाँ छोरी ज्वाँई पहिलो बर्ष दशैको टिका थाप्न आउने भनेपछि तयारीका लागि भ्याई नभ्याईमा थिए । तर दु’र्भाग्य बाबु आमाको त्यो खुशी र दशैंको उत्साहमा निरासा हुन पुग्यो । बिबाह गरेको ५ दिन नबित्दै छोरी नव बेहुलालाई छाडेर बे’पत्ता भईन । दशैंको संघार देखि अहिले अन्तिम सम्म दुबै परिवारजन उनको खोजीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा धाई रहेका छन । ललिताका दाजु हिमाल बिकका अनुसार उनी छिमेकी सागर परियार संग भागी बिबाह गरेर भा’गेको एसएमएस आई सकेको छ । फोनमा कहिले बुटवलमा त कहिले काठमाण्डौ भन्ने गरिएका छन्।
यसै समाचारदाताले फोन गर्दा सागरले फोन उठाए । उनले भने–” म अहिले मिक्सीङ्गमा ब्यस्त छु, तपाई खै को हो मैले चिनिन ।”अर्को पटक फोन गर्दा उठाएनन् । दाजु हिमाल भन्छन– ”बहिनी र सागरबीच लभ थियो भन्ने हामीलाई थाह भएको भए हामीले बिबाह गराई दिने थिएनौं । करनजी र हामी पहिल्लै देखिका नातेदार हौं, उहाँहरु माग्न आएपछि हामीले केटा केटीलाई सम्मुख बनाएका थियौं । बहिनी बिबाहका लागि राजी भएपछि कुरा छिनिएको थियो ।’सागरले अघि थपे , सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि हामी दुबै परिवार प्रहरीको सहारा लिन आएका हौं ।”
उनीहरुले शुक्रवार जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिपककुमार बस्नेतलाई भेट गरी यथासिघ्र खोजतलासका लागि आग्रह गरे । झण्डै ६ लाख खर्चेर बिबाह गरेको बताउने करन यति बेला निकै निरास देखिन्छन । उनको भनाई यस्तो छ–” म माथी निकै ठुलो धोका भयो । गर–गहना सहित झण्डै ६ लाख खर्चेर बिबाह गरियो । त्यस अघि उनीसंग बेग्लै बसेर मन खोला खोल भएको थियो । उनी राजी भएपछि बिबाहको कुरा छिनिएको थियो । त्यसरी सागर भन्ने केटा संग पहिलादेखि नै लभ थियो भने उति बेलै भन्नु पर्दथ्यो ।
जब घर लगियो उनी रोई मात्र रहिन् केहि बोलीनन् । चार पाँच दिन सम्म पनि उनले मलाई नजिक पर्न पनि दिईनन ।” केटाको भारतबाट मजदुर गरेर कमाएको लगभग ६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । केटिलाई ईमान्दारी पुर्वक सम्पर्कमा आई उनको गर–गहना र अन्य सामाग्री बुझाउन उनले आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो चरण माया प्रेम र बिबाह समन्धमा यस्तो घटना नौलो नहुने गरेकोले पनि बिबाह पूर्व केटा केटी दुबैलाई बढी नै सोधपुछ र बिबाह मितिको ग्याव केहि फराकिलो पारेर कुरा टुङ्गाउनु पर्ने देखिन्छ ।
Prevअत्यन्त दुखत खबर !! आर्यघाटको छाना भत्किँदा मलामी गएका १८ जनाको मृ,त्यु
Next९ बर्षिय सचिन परियारले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ३ नम्बर ट्रेन्डिङमा (भिडियो हेर्नुहोस)
सा’मूहिक ब’ला’त्का’रपछि एयरहोस्टेसको मृ’त्यु, होटलको बा’थटबमा ला’श
घरमा आउँछ डबल खुसी, एकै पटक दुई सन्तान, कसरी बस्छ जुम्ल्याह गर्भ ? (भिडियो)
अर्कैसंग बिहे गरेको तीन वर्षसम्म पनि पुर्व श्रीमानलाई बिहे गरेको छैन भनेर झुक्कयाउँदै यसरी पैसा असुलि रहिन् पूर्व प्रहरी हवल्दारकी श्रीमतीले, रुँदै सुनाए आफ्ना पिडा (भिडियोसहित)
आज पुष १७ गते शुक्रबार, संताेषी माताकाे दर्शन स्वरुप ॐ लेखी एक सेयर गर्दै हेर्नुहाेस् आजको राशीफल
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3264)
होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि… (633)